TSY FANDRIAM-PAHALEMANA AO AMBATO BOENY : Miha mahery vaika ny vono olona
Manao antso avo amin’ny mpitondra fanjakana ankehitriny ireo vahoaka monina ao amin’ny Faritra Ambato Boeny noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana sy ny vono olona ao an-toerana. 19 octobre 2017
Mahavalalanina ny fahasahian’ireo dahalo tonga mandroba na dia eo aza ny fandraisan’andraikitra ataon’ny mpitandro filaminana.
Ankoatra ny fanafihana tokantrano sy ny halatr’omby fanaon’izy ireo hatramin’izay dia nanjaka dia nanjaka indray tato ho ato ny famonoana olona sy ny fandoroana trano fonenana rehefa vita ny natao rehetra. Mandry tsy lavo loha tanteraka izy ireo ary mangataka amin’ireo olona manana andraikitra amin’ny firenena mba hijery akaiky ny zava-misy satria efa mihatra aman’aina ny manjo azy ireo raha toa ka tsy misy fiafarany izao. Porofo mivaingana, ohatra, ny zava-nitranga tao amin’ny fokontanin’Ambatomasina roa herinandro lasa teo izay.
Tapitra noravain’ireo dahalo daholo ny trano teo amin’ny manodidina nandritra ny fandrobana, novakian’izy ireo ihany ny toeram-pisotroana iray ka tapitra nosotroin’izy ireo ny zava-pisotro mahamamo rehetra tao. Taorin’izay dia noentin’ireo nitsoaka ny omby efa an-jatonjatony. Marihana fa tonga dia mandeha maromaro hatrany ireo dahalo mba hoentina handresena ny fokonolona. Soa ihany fa miezaka manatanteraka ny asany ireo zandary na dia somary mafy aza ny ady atrehina.
Betsaka amin’reo zandary amin’izao fotoana izao no lavon’ny bala mandritra ny fanarahan-dia saingy manao izay ho afany izy ireo hatreto mba handresena ny asan-dahalo. Fantatra àry fa efa tafaverina tamin’ny tompony tamin’ny fiandohan’ny herinandro lasa teo ny omby miisa 64 tamin’ireo omby nangalarina. Mbola tafatsoaka kosa anefa ireo malaso ary mbola mitohy ny fitsirihana azy ireo ao amin’ny manodidina an’Ambato Boeny.
Vao tsy ela akory fa anisany tena nampatahotra ny mpiara-monina ny namonoan’ireo mpandroba ny vadin’ny filohan’ny Dinabe voatafika tao amin’ny Fokontanin’Ambohimarina ny faran’ny herinandro teo. Avy notafihina sy nalaina izay tiana nalaina dia novonoina tamin’ny fomba feno habibiana ilay ramatoa.
Nivarahontsana ny mponina nanoloana ity tranga ity ary velon-taraina mafy amin’izao fotoana izao. Namoaka fanambaràna momba izay tsy fandriam-pahalemana izay ny Ben’ny tanàna Jean Valérien Rakotonandrasana ary nanamafy fa “mandry tsy lavo loha ny vahoak’Ambato Boeny ary mila vonjy”. Mila fanampiana araka izany izy ireo ka vahaolana maharitra avy amin’ny fanjakana no tadiavina.
Loza mandringana noho ny aretina pesta ny tsy fandriam-pahalemana, hoy hatrany ity Ben’ny tanàna ity ka miangavy ny famahana ny olana manerana ny Nosy mihitsy ny tenany.
Mivoy resa-poko sy fankahalana ny filohan’ ny oniversiten’i Toamasina sy ny ekipany RAHARAHA BARIKADIMY (4660) 25 février 2021 Hivadika ho “tolona” ny tatitry ny Depiote Tim MIKATSAKA FANDATSAHAN-DRA (231) 25 février 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (143) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (137) 2 mars 2021 Handray andraikitra hatrany hisorohana izay rehetra mety ho fanakorontanana EMMO/NAT (78) 25 février 2021 « Hatao laharam-pahamehana ny fampianarana » FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA (70) 25 février 2021